काठमाडौं, १६ मंसिर । पार्टी कार्यालय र सिंहदरबारलाई एकसाथ बालुवाटार सार्ने अभ्यासलाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सुरुवात गरेका थिए भने केपी शर्मा ओलीले निरन्तरता दिइरहेका छन् ।
आलोचना नभएको होइन । पार्टीको बैठक पार्टी कार्यालयमै गरिनुपर्ने र सिंहदरबारको काम बालुवाटारबाट गरिनुपर्ने माग पार्टीका बैठकमा यदाकदा उठिरहन्छ । सामाजिक सञ्जालमा भने लगातार विरोध भइरहेको छ ।
तर, वयोवृद्ध प्रधानमन्त्री न पेरिसडाँडाको भर्‍याङ उक्लन सक्छन् न धुम्बाराहीमा सुरक्षित महसुस गर्न सक्छन् । यसअघि एकपटक प्रधानमन्त्री ओलीले पेरिसडाँडाको भर्‍याङ उक्लिएका छन् । दोस्रो दिन उनले पुनः बालुवाटारमै बैठक सारिदिए । कारण थियो- भर्‍याङ उक्लिन गाह्रो हुनु ।
कार्यालय समयमा सिंहदरबार जान नसक्ने र कार्यालयको भर्‍याङ उक्लन नसक्ने मानिसले कसरी देशको नेतृत्व गर्न सक्छन् ? यस्ता प्रश्नहरुसहित सामाजिक सञ्जालमा विरोध नभएका होइनन् । तर, दुई तिहाई बहुमत नजिक रहेको सत्तारुढ दलका नेताहरुले प्रधानमन्त्रीलाई बालुवाटारबाट निकालेर पार्टी कार्यालय पुर्‍याउन मुस्किल परिरहेको छ ।
सरकारले पार्टी चलाउने कि पार्टीले सरकार चलाउने ? यो प्रश्न प्रचण्डको दस्तावेजमा छ । उत्तर दिँदै ओलीले भनेका छन्- हामी संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास गरिरहेका छौं । पुरानै कम्युनिष्टको शासन होइन ।
प्रश्न उठेको छ- संसदीय अभ्यासमा प्रधानमन्त्रीले पार्टी काम कहाँबाट गर्नुपर्ने हो ? सिंहदरबारबाट गर्नुपर्ने काम बालुवाटारबाट गर्ने कुरा नै संसदीय अभ्यास हो ? स्मरणीय छ- ओलीको कार्यकालमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक पनि सिंहदरबारमा बसेका उदाहरण खोज्न पनि मुस्किल छ ।
मंगलबार दिउँसो धुम्बाराहीमा बस्ने भनिएको बैठकमा पनि यस्तै भयो । डर देखाइयो राजावादीहरुको प्रदर्शनको । ‘धुम्बाराहीमा बैठक राख्दा राजावादीहरुबाट हो-हल्ला, जुलुस र सुरक्षा खतराको संकेत देखिएको’ कारण देखाइएको छ ।
प्रश्न उठेको छ- प्रधानमन्त्रीले आफ्नै पार्टी कार्यालयमा सुरक्षित बैठक बस्न नसक्ने हो भने यो देशमा जनताको अवस्था के होला ?
बालुवाटार पूर्णरुपमा नियन्त्रणमा रहेकोले प्रधानमन्त्रीले त्यही सजिलो मान्ने ओली निकट नेताहरु बताउँछन् । तर, बालुवाटार बैठकका अडियोहरु रेकर्ड हुनथाले पछि दाहाल-नेपाल समूहले भने पार्टी बैठक धुम्बाराहीमै बस्नुपर्नेमा अडान दोहोर्‍याइरहेको छ ।